FANDAMINANA MAHAJANGA : Noesorina ireo mpivarotra manodidina ny biraon’ny Polisy
Ny alatsinainy maraina teo no noesorina ireo mpivarotra sy ny tranohevany manodidina ny biraon’ny Polisy eny Mahabibo. 12 septembre 2018
Tato anatin’ny volana vitsivitsy dia nihamaro ireo mpivarotra manodidina io kaomisaria io ka lasa manemban- tsembana tanteraka ny fivezivezena teny. Araka ny nambaran’ireo mpivarotra dia mandoa haba amin’ny kaominina izy ireo izay mahatratra roa alina isam-bolana ka izany lehilahy atao hoe Domnique izany no mpandray ny vola sy manatitra ny ticket.
“Manara-dalàna izahay hoy ireo mpivarotra ka tokony ho nomena fampahafantarana mialoha fa tsy tonga dia ongotana fotsiny”. Tsy manara-dalàna kosa izy ireo raha ny lalàna satria voasokajy ho faritra mena ny manodidina ny tobin’ny mpitandro filaminana, ary tsy azo ivarotana ihany koa ny manodidina ny biraom-panjakana.
Manambara kosa ny tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina fa azo esorina amin’ny fotoana ilàna ny toerana ireo mpivarotra ireo, na dia nahazo fahazoan-dalana tamin’ny kaominina aza.
Taratasy avy amin’ny tompon’andraikitry ny polisy kosa no nanesorana ireo mpivarotra. « Misy kosa ny fifampiresahana sy fifanatonana amin’ny roa tonta, hoy ny tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina, ary hamerina ny zaridaina napetraka teo ny mpanao zaridain’ny kaominina. Tery ny lalana, fotoam-pialan-tsasatra izao ary ho avy koa ny fihaonamben’ny tanora na JMJ ka ho maro ny vahiny ho avy eto Mahajanga, izany indrindra no antony nanesirana ireo mpivarotra ».